Nezve ZHENGXI - Chengdu Zhengxi Hydraulic Equipment Kugadzira Co, Ltd.
Chengdu Zhengxi Hydraulic Equipment Kugadzira Co., Ltd. iri munzvimbo yakanaka yeQingbaijiang Mahara Ekutengeserana eChengdu. Iyo kambani inovhara nzvimbo ye45,608 mativi emamirimita, kusanganisira inorema workshop nzvimbo yemakumi matatu emazana emamita mita. Iyo hombe-pamwero nyanzvi gadziriro yemagetsi ekudhinda muChina. Iyo kambani ine vanopfuura zana mainjiniya uye mahunyanzvi uye gumi nemaviri emunyika ekugadzira patent. Yakachengetedza kubatana kwepedyo nemayunivhesiti mazhinji anozivikanwa epamba uye masangano ekutsvagisa kwenguva yakareba uye yakazvipira kuve piyona wehunyanzvi mu hydraulic muchina indasitiri.
Kambani yedu ine maseti anopfuura makumi matanhatu emichina chaiyo yekushandisa. Kufanana neJapan rinorema basa lathe, Vertical lathe, Makemikari anofinha uye ekugaya muchina, mukuyi nezvimwewo Uye zvakare nepamusoro timu yehunyanzvi, vanopfuura zana nyanzvi yehunyanzvi vashandi. Vachaedza nepese pavanogona napo kugadzira michina yakanaka kumutengi wedu. Tine yakazvimirira mushure-yekutengesa dhipatimendi, yakazara mushure-yekutengesa sevhisi yevatengi. Mukati maawa maviri mushure mekugamuchira runhare rwekugadzirisa, dambudziko rakazosvika mukati maawa masere muSichuan Province uye mukati maawa makumi mana nemasere pasirese. Uye injiniya wedu anozopa sevhisi sevhisi zvakare.
Vatengi Around Iyo Nyika
Shanyira mutengi wevatengi vedu kutenderedza pasi rose
Gadzira inotungamira mhando muindastiri.
Ipa muchina wakachengeteka, wakatsiga uye unoshanda zvakanyanya.
Bhadhara zvakaenzana kudzoka, mutengo wakaenzana kukosha, uye ita kuti vashandi, vatengi, vagovani, uye vatengesi ive yekuhwina-kuhwina mamiriro.